IMacX Video Converter Pro, esona siguquleli siluncedo kakhulu seMacOS (Simahla simahla ngoLwesihlanu oMnyama) | IPhone iindaba
IMacX Video Converter Pro, esona siguquleli siluncedo kakhulu seMacOS (simahla ngoLwesihlanu oMnyama)
Ngaba uyafuna ukufumana ividiyo kunye nefomathi esiguquliweyo simahla? IMacX Video Converter Pro sisixhobo esiya kwenza lo msebenzi ube lula kangangoko kunokwenzeka.kusenzima ukuze singabinangxaki apha endleleni nangoku ungayifumana simahla Kumsitho wangoLwesihlanu omnyama nge kuphela bhalisa apha ngaphambi kukaDisemba 6.
Abasebenzisi be-IOS ngokubanzi banengxaki enkulu xa kuziwa ekuhambiseni iifayile ze-multimedia, kwaye yiyo loo nto Ayisiwo umculo kuphela ekufuneka ungene kwi-iTunes ukuze sikwazi ukujonga umxholo ngokuchanekileyo kwi-iPhone yethu okanye i-iPad, kodwa iividiyo kunye neemovie zifuna ifomathi ekhethekileyo kunye nesoftware esivumela ukuba siyijonge ngaphandle kwengxaki. Ke ngoku ukuba ungayifumana simahla okwexeshana, masibone izibonelelo zeMacX Video Converter Pro.
Ukuqala, enye Isiguquli sevidiyo se4K ye-macOS ithandwa kakhulu, kwaye ayisiyiyo ngokuchanekileyo kuba konke eyenzayo kukuguqula iividiyo kunye nemovie zenze ezinye iifomathi, kuba sele sinezinye izixhobo ezininzi, kodwa ngenxa yokuba iyakusivumela ukuba sifikelele kumxholo ongapheliyo kunye nobuncinci bobunzima. Yenzelwe ukwenza ubomi bakho bube lula kule nto, kodwa ayizukuphela kokuyithetha, siza kubona ukuba isebenza njani kwaye iyakwazi ukwenza ntoni.
1 Yintoni iMacX Video Converter Pro ekwaziyo?
2 Khuphela iividiyo zikaYouTube kwiMac yakho
3 Umxholo owongezelelweyo kunye nexabiso leMacX yeVidiyo yokuguqula iPro
Yintoni iMacX Video Converter Pro ekwaziyo?
Yonke iyinto enye Iya kusivumela ukuba siguqule, sihlele kwaye irekhode iscreen sedivayisi yethu ye-iOS ngokulula. Phakathi kwezinye izinto zikalwe njengengxoxo yevidiyo ekhawulezayo ye-macOS. Umzekelo, unokukhuphela iividiyo zakho ozithandayo kwiYouTube okanye abanye ababoneleli ngendlela ofuna ngayo, kwaye uguqule ifomathi yabo ukuze i-iPhone kunye neMacOS zidlale ngokuchanekileyo.
Iya isanda ngokuxhaphakileyo into yokufumana umxholo we-4k nakweyiphi na iqonga, kunye nokuba yinto eqhelekileyo ukukwazi ukurekhoda ngesi sisombululo, nokuba yi-iPhone, ngeGoPro, ngekhamera yevidiyo ... Enkosi kwi-MacX Video Converter Pro, iividiyo ngefomathi ye-4K azisayi kuba yingxaki xa kuziwa ekuzidlalayo nakwesiphi na isixhobo, kuba iyakwazi ukuguqula nayiphi na ividiyo ye-4K UHD kwisisombululo esisezantsi kunye neefomathi ezihambelana nazo zonke izixhobo, ngakumbi nge-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod touch, kubandakanya iifomathi zeMKV kunye neM2TS kwi4K, ezisasebenza nanamhlanje kwizixhobo zeApple.
Kodwa asijonganga iingxaki kuphela kwizixhobo zeApple kunye / okanye usetyenziso kwezinye iifomathi, kodwa ezinye izicelo kunye nabahleli bevidiyo abangaxhasiyo esi sisombululo, besinyanzela ukuba sibashukumisele kwezinye iifomathi ngelixa sinciphisa isisombululo esifanayo, umsebenzi iMacX Video Converter Pro isebenza ngokugqibeleleyo, ihlonipha ubukhali kunye nomgangatho wayo wokuqala. Njengokuba oko kwakunganelanga, ikwasivumela sindisa umxholo orekhodwayo we-1080p kwi-4k, ukuze ukwazi ukuyivelisa kwakhona kwizixhobo ezihambelanayo kunye nokwabelana ngayo kwiinethiwekhi zentlalo kubandakanya neYouTube, apho inani leevidiyo landa ngokunyuka.
Kodwa iMacX Video Converter Pro ayihambelani kuphela nazo zonke iifomathi zevidiyo nezomsindo ezikhoyo kwintengiso, ikwakhona ngokukhawuleza okukhulu ukuguqula kunezinye izinto ezinje ngeBrakeBrake. Esi sicelo sithatha imizuzu eli-1080 ukuguqula ividiyo eyi-264p kwifomathi ye-H.3 kunye nesandi se-AC4 kwifomathi ye-MP15, amaxesha angama-6 ngaphantsi kwe-HandBrake. Ikhowudi entsha yevidiyo esetyenziswe kwi-iOS, H.265 iyahambelana nale sicelo Isivumela ukuba sibunciphise ubungakanani beevidiyo zethu nale app.
Nangona iMacX Video Converter Pro yinkqubo ehlawulelweyo, ungayifumana simahla okwexeshana. Ekupheleni kwenqaku uya kufumana ikhonkco ukuyikhuphela ukuze uthathe ithuba kwaye ufumane le vidiyo iguquli ye-Mac eya kukuvumela ukuba uthumele ngaphandle kwiifomati ezihambelana neMovie, Final Cut Pro, iTunes, izixhobo ze-iOS kunye nezinye ezininzi.
Khuphela iividiyo zikaYouTube kwiMac yakho
I-YouTube lelona qonga lifashoni, kwaye yeyiphi indlela ebhetele kunokubukela iividiyo naphina, nanini na kwaye nangayiphi na indlela ofuna ngayo. Ngenxa yoku siza kuthatha ithuba leMacX Video Converter Pro, esivumela ukuba sikhuphele iividiyo kuzo zonke iimpawu, kubandakanya i-FullHD, 4K kunye ne-3D. Ewe umsindo ubandakanyiwe, ukusuka kwi-MP3 ukuya kwi-MP4Nokuba yeyiphi I-YouTube okanye nawuphi na umthombo wevidiyo onje nge-Facebook okanye kwi-Dailymotion, inyani kukuba iVideoX Converter Pro izakuvula amathuba amaninzi kule meko, ngekhe sikwazi ukuyikhanyela. Lo ngomnye wemizekelo yesoftware ethi inikwe iMacXDVD yeMac.
Umxholo owongezelelweyo kunye nexabiso leMacX yeVidiyo yokuguqula iPro
Phakathi kwezinye izinto nanjengoko besesitshilo kutshanje, ngeMacX Video Converter Pro siya kuba nakho ukuhlela ividiyo, songeza imibhalo engezantsi, ukusika iscreen kunye neendawo ezineenkcukacha, ukususa imivalo emnyama kunye nokongeza ii-watermark xa sifuna ukwenza ividiyo enye. Ewe iMacX Video Converter Pro ithathwa njengenye indlela enomdla kakhulu, Umbono wokugqibela kukwenza imisebenzi elula ngokulula kangangoko kunokwenzeka, kwaye iyenzeka.
Isicelo sihlala sixabisa i- $ 59,95, Iyafumaneka kuwo onke amaqonga avela kwi-macOS X Leopard ukuya kuhlobo lweMacOS X Sierra. Ungaphoswa lithuba lokuzama lo mhleli wevidiyo oya kuthi usivumele ukuba sikhuphele iividiyo zeYouTube, ngaloo ndlela sizise izixhobo ezininzi kwenye kwaye mhlawumbi ungalahla i-iTunes ngokusisigxina, konke kungumbandela wokuzama nokuzimisela ukuba uyawenza ngokwenene kufanelekile, kodwa ishiye incasa emnandi emlonyeni wam.
Nangona kunjalo, ngendlela yokukhuthaza nakwisihlandlo soMnyama ngoLwesihlanu unako Fumana iMacX Video Converter Pro yasimahla okwexeshana kude kube nguDisemba 6, 2017. Kuya kufuneka ufake i-imeyile yakho kwaye uyakufumana ikhowudi enephepha-mvume lokusebenzisa usetyenziso.
Unokukhetha kwakhona Yonwabela iMacX yeVidiyo yokuVavanya nge50% isaphulelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » IMacX Video Converter Pro, esona siguquleli siluncedo kakhulu seMacOS (simahla ngoLwesihlanu oMnyama)
Izikrini ezigcweleyo, imfashini okanye ukusebenziseka? Injalo imeko ye-iPhone SE-X
Sifundisa indlela yokuguqula iAnimojis ye-iPhone X ibe yifomathi ye-GIF